Iindaba-Yintoni ekufuneka uyijongile kwi-Monitor Monitor
Yintoni ekufuneka ujonge kuyo kwiMidlalo yokuGada
I-Gamers, ngakumbi i-hardcore, zizinto ezinomdla kakhulu, ngakumbi xa kufikwa ekukhetheni esweni esifanelekileyo somdlalo wokudlala. Ke bajonge ntoni xa bethenga?
Ubungakanani kunye neSigqibo
Ezi zinto zimbini ziyahambelana kwaye ziphantse zahlala ziqwalaselwa ngaphambi kokuthenga esweni. Iscreen esikhudlwana ngokuqinisekileyo sibhetele xa uthetha ngokudlala. Ukuba igumbi liyakuvumela oko, khetha i-27-incher yokubonelela ngendawo yokuthengiswa kwezindlu.
Kodwa isikrini esikhulu asizukulunga ukuba sinesisombululo esimnandi. Cwangcisa ubuncinci isikrini esigcweleyo se-HD (inkcazo ephezulu) yesikrini esine-pixels ezili-1920 x 1080. Ezinye iimonitha ezingama-27-intshi ezintsha zibonelela ngeWide Quad High Definition (WQHD) okanye iiphikseli ezingama-2560 x 1440. Ukuba umdlalo, kunye ne-rig yakho yokudlala, ixhasa i-WQHD, uya kunyangwa nakwimizobo egqibeleleyo kune-HD epheleleyo. Ukuba imali ayisiyongxaki, ungaya nakwi-Ultra High Definition (UHD) ebonelela ngeepikseli ezingama-3840 x 2160 zobuqaqawuli bemizobo. Unokukhetha phakathi kwescreen esinomlinganiso we-16: 9 kunye ne-21: 9.
Hlaziya ireyithi kunye nePixel Response
Ireyithi yokuhlaziya ngamatyeli angakanani ekubekeni esweni ukuyila kwakhona isikrini ngomzuzwana. Ilinganiswa kwi-Hertz (Hz) kwaye amanani aphezulu athetha imifanekiso engacacanga. Uninzi lwabahloli ekusetyenzisweni kwesiqhelo kukalwe nge-60Hz elungileyo ukuba wenza nje izinto zaseofisini. Iimfuno zokudlala okungenani i-120Hz yokuphendula ngokukhawuleza komfanekiso kwaye yinto eyimfuneko ukuba ucwangcisa ukudlala imidlalo ye-3D. Unokukhetha kwakhona iimonitha ezixhotyiswe nge-G-Sync kunye neFreeSync ebonelela ngokungqamanisa nekhadi lemizobo elixhaswayo ukuvumela amaxabiso okuhlaziya ahlukileyo kumava okudlala. I-G-Sync ifuna ikhadi lemizobo elisekwe kwiNvidia ngelixa iFreeSync ixhaswa yi-AMD.
Impendulo ye-pixel yokubek 'esweni lixesha apho ipikseli inokutshintsha ukusuka komnyama iye emhlophe okanye ukusuka komnye umthunzi ongwevu uye komnye. Ilinganiswa ngeemilisecond kwaye ezantsi amanani akhawuleze impendulo yepikseli. Impendulo ye-pixel ekhawulezayo inceda ukunciphisa iipikseli zesiporho ezibangelwa yimifanekiso eshukumayo ekhawulezayo eboniswe kwimonitha ekhokelela kumfanekiso othe tyaba. Impendulo efanelekileyo ye-pixel yokudlala zii-2 milliseconds kodwa i-4 milliseconds kufuneka ilungile.
Iphaneli yeTekhnoloji, igalelo leVidiyo, kunye nabanye
Iiphaneli ezijijekileyo zeNematic okanye ze-TN zezona zinexabiso eliphantsi kwaye zibonelela ngamaxabiso ohlaziyo olukhawulezayo kunye neempendulo zepikseli ezenza ukuba zilungele umdlalo. Nangona kunjalo ababoneleli ngeeengile ezibukhali. Ukuma ngokuthe nkqo okanye i-VA kunye ne-In-Plane switching (IPS) zinokubonelela ngokwahluka okuphezulu, umbala ogqwesileyo, kunye nee-angles zokubukela ezibanzi kodwa zichaphazeleka kwimifanekiso yesiporho nakwizinto zakudala ezishukumayo.
Ukubeka esweni ukufakwa kwevidiyo ezininzi kufanelekile ukuba usebenzisa iifomathi ezininzi zemidlalo ezinje ngeekhonsoli kunye neePC. Amazibuko aliqela e-HDMI alungile ukuba ufuna ukuswitsha phakathi kwemithombo emininzi yevidiyo njengethiyetha yasekhaya, ikhonsoli yakho yomdlalo, okanye isixhobo sakho sokudlala. I-DisplayPort ikwafumaneka ukuba ukubeka esweni kwakho ixhasa i-G-Sync okanye iFreeSync.
Ezinye iimonitha zinezibuko le-USB lokudlala ngokuthe ngqo kumdlalo bhanyabhanya kunye nezithethi ezine-subwoofer yenkqubo yokudlala epheleleyo.
Bobuphi ubungakanani bokubeka esweni ikhompyuter eyona ilungileyo?
Oku kuxhomekeke kwisisombululo ojolise kuso kunye nokuba ungakanani na idesika onayo. Ngelixa inkulu ibonakala ijongeka ingcono, ikunika indawo ebonakalayo yescreen somsebenzi kunye nemifanekiso emikhulu yemidlalo kunye neemovie, banokuzolula izigqibo zenqanaba lokungena njenge-1080p ukuya kumda wokucaca kwazo. Izikrini ezinkulu zifuna igumbi elingaphezulu kwidesika yakho, ke siyaku lumkisa ukuthenga i-ultrawide enkulu njenge-JM34-WQHD100HZ kuluhlu lwethu lweemveliso ukuba usebenza okanye udlala kwidesika enkulu.
Njengomgaqo okhawulezayo wesithupha, i-1080p ijongeka intle ukuya kuthi ga kwi-intshi ezingama-24, ngelixa i-1440p ijongeka intle ukuya kuthi ga ngaphaya kwe-intshi ezingama-30. Asinakucebisa isikrini se-4K nasiphi na esincinci kune-intshi ezingama-27 njengoko ungazukubona isibonelelo sokwenyani seepikseli ezongezelelweyo kwindawo encinci ngesi sigqibo.
Ngaba ii-4K monitors zilungile kwimidlalo?
Banokuba njalo. I-4K ibonelela ngokubalaseleyo kweenkcukacha zokudlala kunye nakwimidlalo yomoya ehambelana nendawo inokukunika inqanaba elitsha lokuntywiliselwa, ngakumbi kwimiboniso emikhulu enokubonisa ngokupheleleyo ubunzima bezo pixels kubuqaqawuli bazo bonke. Ezi ndawo zibonisa indawo ephezulu kakhulu kwimidlalo apho amaxabiso esakhelo engabalulekanga njengokucaca kokubonakalayo. Oko kwathethi, sivakalelwa kukuba ukubekwa kweliso kwinqanaba lokuhlaziya okuphezulu kunokunika amava angcono (ngakumbi kwimidlalo ekhawulezayo njengabatoli), kwaye ngaphandle kokuba uneepokotho ezinzulu zokukhupha ikhadi elinemizobo enamandla okanye ezimbini ngokunjalo, awunguye uza kufumana amaxabiso esakhelo kwi-4K. Umboniso we-27-intshi, i-1440p isabonisa indawo emnandi.
Gcina engqondweni ukubeka iliso ekusebenzeni ngoku kuhlala kunxulunyaniswa neetekhnoloji zolawulo ezinje ngeFreeSync kunye neG-Sync, ke jonga obu buchwephesha kunye namakhadi emizobo ahambelanayo xa usenza izigqibo zokujonga umdlalo. IFreeSync yeyamakhadi emizobo ye-AMD, ngelixa i-G-Sync isebenza kuphela nee-GPU zeNvidia.
Kukuphi okungcono: i-LCD okanye i-LED?
Impendulo emfutshane kukuba bobabini bayafana. Impendulo ende kukuba oku kukusilela kwintengiso yenkampani ekuhambiseni ngokufanelekileyo iimveliso zayo. Namhlanje uninzi lweemonitha ezisebenzisa itekhnoloji yeLCD zibuyiselwe umva ngee-LEDs, ke ngoku ukuba uthengela esweni zombini iLCD kunye nokuboniswa kwe-LED. Ngolwazi oluthe kratya kwitekhnoloji yeLCD kunye ne-LED, sinesikhokelo esipheleleyo esizinikele kuyo.
Oko kwathethi, kukho izibonisi ze-OLED ekufuneka ziqwalaselwe, nangona ezi paneli zingenzanga mpembelelo kwintengiso yedesktop. Izikrini ze-OLED zidibanisa umbala kunye nokukhanya kwipaneli enye, eyaziwa ngemibala yayo eqaqambileyo kunye nomlinganiso wokuthelekisa. Ngelixa itekhnoloji ibisenza amaza kwiithelevishini iminyaka embalwa ngoku, baqala nje ukwenza inyathelo lokuzama kwilizwe labahloli be desktop.
Loluphi uhlobo lokujonga esona silungileyo emehlweni akho?
Ukuba unengxaki yamehlo, jonga iimonitha ezakhelwe ngaphakathi kwisoftware yokukhanya, ngakumbi iifilitha ezenzelwe ngokukodwa ukunciphisa iingxaki zamehlo. Ezi zihluzo ziyilelwe ukuthintela ukukhanya okungaphezulu kweblue, eyinxalenye yesibuko esichaphazela kakhulu amehlo ethu kwaye inoxanduva lweengxaki ezininzi zamehlo. Nangona kunjalo, unokukhuphela iifayile zesoftware yamehlo kulo naluphi na uhlobo lokujonga esweni olifumanayo